Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.4 Ònye ịjụ
Ihe gbasara nke puru samples na-abụghị nke puru omume samples na-adịghị na dị iche iche n'olu; ma ikpe, ọ bụ ihe niile banyere ịdị arọ ihe.
Ụfọdụ bụ isi na-elegharị nnyocha. Researchers fọrọ nke nta mgbe ịjụ ha ajụjụ onye ọ bụla nọ ha lekwasịrị anya na onu ogugu. Na nke a, nnyocha ndị e mere na-adịghị ihe pụrụ iche. Ọtụtụ ná nchọpụta, na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-agụnye ụfọdụ. Mgbe ụfọdụ, a nlele a na-eme n'ụzọ doro anya na site na-eme nchọpụta; ndị ọzọ mgbe ọ na-eme n'ụzọ zuru ezu. Dị ka ihe atụ, a na-eme nchọpụta na-agba a laabu nnwale on Undergraduate ụmụ akwụkwọ na ya mahadum ka ewerewokwa a sample. N'ihi ya, ụfọdụ nwere nsogbu nke na-abịa elu nile nke akwụkwọ a. N'eziokwu, otu n'ime ihe ndị kasị akpata nchegbu na m na-anụ banyere digital afọ na isi mmalite nke data bụ "ha na-adịghị anọchite anya." Dị ka anyị ga-ahụ na nke a Nkebi, a nchegbu bụ ma obere oké njọ na ndị ọzọ aghụghọ karịa ọtụtụ-arụ eziokwu ụka na-aghọta. N'ezie, m ga-arụ ụka na dum echiche nke "representativeness" abụghị na-enye aka n'ihi na-eche echiche banyere ihe gbasara nke puru na-abụghị nke puru omume samples. Kama, ndị isi bụ na-eche echiche banyere otú ndị data na-anakọtara na otú ọ bụla biases na na data collection nwere ike imegharị ya mgbe na-eme atụmatụ.
Ugbu a, ndị ọchịchị kasị n'ọnụ obibia onodi bụ nke puru omume ụfọdụ. Mgbe data na-anakọtara na a gbasara nke puru omume ụfọdụ usoro nke e zuru okè gburu, na-eme nnyocha na-enwe ike ibu ha data dabeere n'ụzọ na ha na-anakọtara ime ka ebinyeghị akụkụ ọ bụla atụmatụ e mere banyere lekwasịrị bi. Otú ọ dị, zuru okè nke puru omume ụfọdụ ihu ọma mgbe itịbe ke ata ụwa. E nwere a na isi ihe abụọ nsogbu 1) iche n'etiti iche bi na eku bi na 2)-abụghị omume (ndị a bụ kpọmkwem nsogbu ndị ya mebiri ihe ndị edemede Digest nghoputa). Ya mere, kama na-eche echiche nke puru omume ụfọdụ dị ka a ezi uche nlereanya nke ihe n'ezie na-eme n'ụwa, ọ dị mma na-eche echiche nke puru omume ụfọdụ dị ka a na-enye aka, nkịtị nlereanya, dị nnọọ ka ụzọ ọmụmụ physics na-eche banyere a ejikọta bọl inyefe ala ihe infinitely ogologo ramp.
The ọzọ ka puru omume ụfọdụ bụ ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ. Isi ihe dị iche n'etiti ihe gbasara nke puru na-abụghị nke puru omume ụfọdụ bụ na ya na ihe gbasara nke puru nlele onye ọ bụla n'ime ka ọnụ ọgụgụ nwere a mara gbasara nke puru omume Nsonye. E nwere ndị, n'ezie, ọtụtụ iche nke na-abụghị nke puru omume nlele, na ndị a ụzọ nke data collection na-aghọ esiwanye nkịtị na dijitalụ afọ. Ma, ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ nwere a egwu aha n'etiti elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na statisticians. N'eziokwu, ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ jikọtara ndị kasị dị ịrịba ama ọdịda nke nnyocha e mere nnyocha, dị ka ndị edemede Digest fiasco (tụlere na mbụ) na-ekwesịghị ịdị amụma banyere US president ntuli aka nke 1948 ( "Dewey merie Truman") (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) .
Otú ọ dị, oge ziri ezi iji tụleghachi na-abụghị nke puru omume ụfọdụ n'ihi ihe abụọ. Akpa, dị ka ihe gbasara nke puru samples na-esiwanye ike ime na omume, na ókè dị n'etiti ihe gbasara nke puru samples na-abụghị nke puru omume samples na-blurring. Mgbe e nwere nnukwu udu nke na-abụghị omume (dị ka e nwere na ozugbo nnyocha ndị e mere ugbu a), nke bụ ezigbo gbasara nke puru omume inclusions maka zaghachirinụ na-amaghị, ma si otú, nke puru omume samples na-abụghị nke puru omume samples na-adịghị dị ka dị iche iche dị ka ọtụtụ ndị na-eme nnyocha kweere na. N'ezie, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru ebe a, ma-eru nso ihu ọma ịdabere na otu ọnu usoro: post-stratification. Nke abụọ, e nwere ọtụtụ ndị na na collection na analysis nke na-abụghị nke puru omume samples. Ndị a ụzọ dị iche iche ezu site na ụzọ ahụ kpataara ha nsogbu n'oge gara aga na m chere na ọ bụ ihe ezi uche na-eche banyere ha dị ka "ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ 2.0." Anyị ekwesịghị inwe ihe enweghị isi na ọdụ mkporomaasi ka ndị na-abụghị nke puru omume usoro n'ihi njehie nke mere a ogologo oge gara aga.
Next, iji mee ka arụmụka a ọzọ ihe, Aga m nyochaa ọkọlọtọ gbasara nke puru omume ụfọdụ na weighting (Nkebi 3.4.1). The isi echiche bụ na otú ị anakọtara gị data ga-emetụtarịrị otú ị na-eme atụmatụ. Karịsịa, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị nwere otu gbasara nke puru omume Nsonye, ​​mgbe ahụ onye ọ bụla kwesịrị gaghị na-arọ. Yabụ, ọ bụrụ na gị nlele abụghị onye kwuo uche, mgbe ahụ, gị estimations ekwesịghị ịbụ onye kwuo uche. Mgbe akafiakde ese weighting, Aga m na-akọwa abụọ bịara ibi nwatakịrị na-abụghị nke puru omume nlele: otu nke na-elekwasị anya weighting obibi nsogbu nke haphazardly anakọtara data (Nkebi 3.4.2), na otu onye nke na-agba mbọ na-edebe nga, otú ahụ data bụ anakọtara (Nkebi 3.4.3). The arụmụka na-isi ederede a ga-kọwara n'okpuru ebe na okwu na foto; agụ ndị na-amasị a ọzọ mgbakọ na mwepụ ọgwụgwọ kwesịkwara ịhụ oru odide ntụkwasị.